Sheekh Mukhtaar Roobow oo Isudhiibey Maamulka Koonfur Galbeed iyo DFS – Radio Daljir
Agoosto 13, 2017 9:37 b 0
Afhayeenka Maamulka Koofur Galbeed Nuuradiin Abuukar, ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Sheekh Mukhtaar Roobow uu isku dhiibay Ciidamada gaarka ah ee Dowladda Soomaaliya.
Waxaa uu xusay in ciidamada dowladda ay ka wadeen Abal, haddana ku sii socdaan Xudur.
Afhayeenku waxaa uu sheegay in Wadahadal ay la galeen Sh. Mukhtaar uu ku oggolaaday in uu tago magaalada Xuddur, halkaas oo uu ku sii sugnaanayo.
Inta badan Ciidamadiisa ayaa looga soo tagay Abal sida uu sheegay Afhayeenka Koonfur Galbeed, Nuuraddiin,waxaana uu sababta ku sheegay in ay halkaas u joogaan sidii ay ula dagaallami lahaayeen Al-shabaab.
Dhinaca kale, kooxda Alshabab ayaa sheegtay inuu Abuu Mukhtaar Roobow isku dhiibay gacanta ciidanka Itoobiya ee ku sugan gobolka Bakool kadib markii laga awood roobaaday dagaalkii Abal.